Ukutya kunye nokutya -Vondt.net
Icandelo loovimba: Ukutya kunye nokutya
Unomdla kwiimpembelelo zokutya kwimpilo yakho? Apha unokufumana amanqaku kwinqanaba lokutya kunye nokutya. Ngokutya kubandakanya izithako ezisetyenziswa ekuphekeni okuqhelekileyo, amayeza, izityalo zendalo, iziselo kunye nezinye izitya.
-Uyitya njani iMiphunga esempilweni!
10 / 08 / 2016 /0 Amazwana/i Ukutya kunye nokutya, Amanqaku mfanelo/av ubuhlungu
Uphando olupapashwe kwiphephancwadi lophando I-American Thoracic Society ibonise ukuba ukutya ngokuchanekileyo kunokuphucula ukusebenza kwemiphunga kunye nemiphunga esempilweni. Uphando lufumanise ukuba nokudla ukudla fiber eliphezulu kunxibelelene ngqo nengozi yehlise nesifo semiphunga.
Izifo zemiphunga yingxaki enkulu eNorway nakwihlabathi jikelele. Ngapha koko, i-COPD ngoyena nobangela wesithathu okhokelela ekufeni kwihlabathi liphela- ke ukuba ungalinciphisa ithuba lesifo semiphunga ngokutya ifayibha ngakumbi, kubandakanya iziqhamo kunye nemifuno, kuya kufuneka wenze konke okusemandleni ukuzikhuthaza kwaye ukulandela.
Okunefayibha nesimo sempilo lung engcono
Amadoda nabafazi abayi-1921 abathathe inxaxheba kolu phando-ikakhulu kwiqela lama-40-70. Isifundo sithathele ingqalelo izinto eziguqukayo ezinje ngemeko yezentlalo noqoqosho, ukutshaya, ubunzima kunye nemo yezempilo ngaphambi kokuqala isifundo. Emva kokuqokelela idatha, bahlula abathathi-nxaxheba ngokokutya kwefayibha kumaqela aphezulu nasezantsi. Iqela eliphezulu lisebenzise umndilili we-17.5 gram yefayibha ngemini xa kuthelekiswa neqela elisezantsi elalidla i-10.75 gram kuphela. Nokuba emva kokuba iziphumo zihlengahlengisiwe ngokwezinto eziguqukayo, kunokuchazwa ukuba iqela elinomxholo ophezulu wefayibha nayo ibinempilo entle yemiphunga. Unalo igalelo? Sebenzisa indawo yokuphawula engezantsi okanye eyethu Facebook Page.
Iziphumo zazicacile kwaye zicacile
Phakathi kweqela eliphezulu elinentambo ye-fiber ye-17.5 yeegram ngosuku, kwaqatshelwa ukuba i-68.3% yayinomsebenzi oqhelekileyo wemiphunga. Kwiqela elisezantsi elinokutya okungaphantsi kwefayibha, kwabonwa ukuba i-50.1% yayinomsebenzi oqhelekileyo wemiphunga- umahluko ocacileyo apho. Izehlo zokuthintelwa kwemiphunga zaziphezulu kakhulu kwiqela elinomxholo ophantsi wefayibha- i-29.8% xa ithelekiswa ne-14.8% kwelinye iqela. Ngamanye amagama: Zama ukutya ukutya okwahlukeneyo okubandakanya imifuno, iziqhamo kunye nezinye izinto ezinomxholo ophezulu wefayibha.
Indlela amaphaphu enempilo ayikwazi ifayibha ivelisa?
Olu pho nonongo alunakuthetha ngokuqinisekileyo nge-100% esona sizathu sokuba i-fiber ibonelele ngempilo engcono yemiphunga, kodwa bayakholelwa ukuba inxulunyaniswa nezinto ezichaseneyo nokudumba. Bayakholelwa ukuba ngenxa yokuba ifayibha inegalelo ekuphuculeni iintyatyambo zamathumbu- oku kuyakuqinisekisa ukuphuculwa kokuphendula komzimba kwizifo. Ukuvuvukala yingcambu yezifo ezininzi zemiphunga, kwaye ukwehla ngokubanzi kule mpendulo yokuvuvukala kunokuba nefuthe elifanelekileyo kwimpilo yemiphunga. Umxholo wefayibha ephezulu ekutyeni unxulunyaniswa nokuncitshiswa CRP (C-esebenzayo iprotein) umxholo-ongumqhubi wokonyuka kokudumba.
Ngamafutshane, 'Yitya iziqhamo nemifuno!' isiphelo seli nqaku. Abaphandi bakholelwa kwelokuba kufuneka siwahoye amayeza kunye nonyango njengonyango kuphela olona lujolise kwizifo zemiphunga, kwaye kungcono sijolise ekuphuculeni ulwazi lokutya kunye nothintelo. Ukutya okusempilweni kufuneka kwakhona kudityaniswe nokuzilolonga kunye nokunyusa umthambo kubomi bemihla ngemihla. Ukuba ufuna ukufunda lonke isifundo, uya kufumana ikhonkco emazantsi kwinqaku.
Zive ukhululekile ukwabelana ngeli nqaku noogxa bakho, izihlobo kunye nabantu obaziyo. Ukuba ufuna amanqaku, imithambo okanye izinto ezinjalo zithunyelwe njengoxwebhu olunempinda-phindo nokunye okunjalo, siyakubuza ezifana kwaye uqhagamshelane ngeFacebook iphepha apha. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, phawula ngokuthe ngqo kwinqaku okanye Ukunxibelelana nathi (mahala ngokuphelele)-siya kwenza konke okusemandleni ethu ukukunceda.
ZAMA OKU: Ukuzivocavoca umzimba oku-6 nxamnye neSciatica kunye neSciatica engeyiyo
Ngaba uyazi ukuba: -Inyango ebandayo inokunika isiqabu seentlungu kumalungu aqaqanjelwa nezihlunu? Phakathi kwezinye izinto, I-Biofreeze (ungay-odola apha), equlathe ikakhulu iimveliso zendalo, yimveliso ethandwayo. Nxibelelana nathi namhlanje kwiphepha lethu le-Facebook ukuba unemibuzo okanye ufuna ingcebiso.
-Ngaba ufuna ulwazi ngakumbi okanye unemibuzo? Buza umboneleli wethu wezempilo ofanelekileyo ngqo (simahla) ngeyethu Facebook Page okanye nge «BUZA-FUMA IMPENDULO!"ikholamu.
Sibanye inkonzo yasimahla apho u-Ola noKari Nordmann banokuphendula imibuzo yabo malunga neengxaki zempilo yemisipha-engaziwa ngokupheleleyo ukuba bafuna njalo.
Ubudlelwane phakathi ukusebenzisa fibre kunye ukusebenza kwemiphunga e NHANES, Corrine Hanson et al., Zemihla ngemihla American Thoracic Society, Doi: 10.1513 / AnnalsATS.201509-609OC, epapashwe online ngoJanuwari 19, 2016, abstract.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Lunger.jpg?media=1648573622 435 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2016-08-10 20:25:092022-03-18 17:27:23-Uyitya njani iMiphunga esempilweni!
I-Cherry Lowers Ithuba le-Gout
02 / 08 / 2016 /0 Amazwana/i Ukutya kunye nokutya, Amanqaku mfanelo/av ubuhlungu
Uphando olwapapashwa kwijenali yophando iArthritis & Rheumatism lubonakalisile ukuba ukutya icherry kunganyanga kakhulu, phakathi kwezinye izinto, igawuthi. Ukutya ii-cherries ngeentsuku nje ezi-2 (!) Ngexesha lonyaka kukhokelele ekunciphisweni kwama-35% kumathuba okukhula gout.
Igawuthi lolunye lweendlela eziqhelekileyo zesifo samathambo - olu hlobo lwegawuthi lubangelwa yi-uric acid eninzi emzimbeni. Ukonyuka kweziganeko ze-uric acid emzimbeni kunokukhokelela kwi-uric acid amakristali kumalungu, amaxesha amaninzi kwinzwane enkulu. I-acid acid eyakhelweyo (ebizwa ngokuba yi-tophi) ekhangeleka ngathi ngamaqhuma amancinci phantsi kolusu.
Isifundo esibalulekileyo ukubonisa isiphumo sezongezo zendalo
Uninzi lwezongezelelo zendalo zinokwenza okuninzi ngokufanayo neepilisi ezimhlophe ezijikelezileyo kunye namayeza- ngaphandle kwemiphumo emibi. Olu phononongo lubonise ukuba iitsheri, ngenxa yomxholo wazo ophezulu wee-antioxidants kunye neziphumo zendalo ezichaseneyo nokudumba, zinendima eziyidlalayo kunyango nasekuthinteleni iifom zegawuthi-kubandakanya igawuthi.
Isifundo silandele abathathi-nxaxheba ngaphezulu konyaka
Uphononongo luvavanye abathathi-nxaxheba abangama-633 kunyaka wonke wekhalenda. Zilandelwe kumanqaku anjengeempawu, izehlo, umngcipheko, amayeza kwaye ngokwendalo ngokwaneleyo, ukutyiwa kweetsheri- zombini ukuba loluphi uhlobo lokutya (ngokwendalo xa kuthelekiswa nokukhupha) kwaye kangaphi. Abaphandi bagqiba kwelokuba ukukhonza iitsheri enye sisiqingatha sekomityi - okanye ishumi elinambini lama cherry.
Ukutya I-Cherry = Ithuba elincinci lesi sifo
Xa belandelisa iqela emva konyaka omnye, amanani abonisa ukuba abo batya iitsheri - kwisithuba nje esincinci esisi-1 ngonyaka-babenamathuba angama-2% asezantsi okubuyela umva kunye nokuqaqamba kwegawuthi. Kwabonakala ngokwendalo ukuba ukutyiwa kweetsheri - ekuhambeni kwexesha- nako kwakudityaniswa nokwehla kwegawuthi. Xa udibanisa ukutya i-cherry ne-allopurinol (ichiza elehlisa i-uric acid) ubone ukwehla okungama-35% kuhlaselo lwegawuthi.
Ukutya kubalulekile kwabo bane-gout. Abantu abanesifo samathambo kufuneka bagxile ekutyeni ukutya okuchasayo kunye nokutya okuphezulu kwii-antioxidants. Sijonge phambili kuvavanyo olukhulu olungenamkhethe ukuze siqiniseke ukuba yintoni iicherry ezinokuyenza kwabo banegawuthi - kodwa kufuneka sithi ikhangeleka ithembisa!
Funda: Ukuzivocavoca umzimba ngokuchasene neSciatica
UZhang et al, Ukusetyenziswa kweCherry kunye nomngcipheko wokuhlaselwa gout kwakhona
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Kirsebær.jpg?media=1648573622 466 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2016-08-02 14:39:152022-03-18 17:26:58I-Cherry Lowers Ithuba le-Gout
Iphepha loku-1 lama-16123>»